TV & Entertainment – ICT.com.mm
Samsung 55-Inches Q60T QLED Smart 4K TV (2020) QA55Q60ABKXMRK1,511,900 K1,351,400-11%
Samsung 65-Inches Q60A QLED 4K Smart TV (2021)4Ticks QA65Q60ABKXMRK2,064,000
Samsung 75-Inches Q60A QLED 4K Smart TV (2021)4Ticks QA75Q60ABKXXTK3,407,000
Samsung 65-Inches Crystal UHD 4K TV UA65AU7000KXXTK1,788,000
Samsung 55-Inches Q60T QLED Smart 4K TV (2020) QA55Q60ABKXMR
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Arrival Date (ရောက်ရှိမည့်ရက်စွဲ): End of January 2022 One billion shades of accurate color The right color tone for every scene Experienceafull range of details Product:...
Samsung 65-Inches Q60A QLED 4K Smart TV (2021)4Ticks QA65Q60ABKXMR
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: Samsung 32-Inches HD LED TV UA32N4003AKXXT Arrival Date (ရောက်ရှိမည့်ရက်စွဲ): End of January 2022 Free Galaxy Watch4 LTE (44mm) + 12 mths CAST + 3mths CatchPlay...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: Samsung 43" FHD Smart TV UA43T6003AKXXT Arrival Date (ရောက်ရှိမည့်ရက်စွဲ): End of January 2022 Free Galaxy Watch4 LTE (44mm) + 12 mths CAST + 3mths CatchPlay...
Samsung 65-Inches Crystal UHD 4K TV UA65AU7000KXXT
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: Samsung 32-Inches HD LED TV UA32N4003AKXXT Stock Code: UA65AU7000KXXT Warranty: 1 Year Product Type: LED Series:7Screen Size: 65" Resolution: 3,840 x 2,160 Picture...
Blackmagic Atem Streaming Bridge + Blackmagic Design ATEM Mini Pro
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Blackmagic Atem Streaming Bridge Connections SDI Reference Inputs: 1 x 3G-SDI SDI Video Outputs:2x 3G-SDI SDI Audio Outputs:2Channels embedded in HD-SDI. HDMI Video...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Connections SDI Reference Inputs: 1 x 3G-SDI SDI Video Outputs:2x 3G-SDI SDI Audio Outputs:2Channels embedded in HD-SDI. HDMI Video Output: HDMI type A...
T-Home 40-Inch LED Smart TV (TH-LTV40D500E)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: TH-LTV40D500E 40 inch LED Smart Display Type: DLED Resolution: 1920*1080 Audio System: B/G,D/K,I Stereo Sound: NICAM Equalizers: YES(4 Modes) Progressive Scan: YES HD Ready: YES PC...
T-Home 32-Inch LED T2 TV (TH-LTV32D400E)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: TH-LTV32D400E 32 inch LED T2 Display Type: DLED Resolution: 1366*768 Audio System: B/G,D/K,I Stereo Sound: NICAM Equalizers: YES(4 Modes) Progressive Scan: YES HD Ready: YES PC...
Cooler Master StreamEnjin All-in-One Livestream Mixer (RM-SEN1-H2H3-R1)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ All-In-One Integration Professional Livestream content Integrated Tablet App (Tablet not Included Preset Storyboard Scenes Simple Controls, Compact & Portable Specification Product Number: RM-SEN1-H2H3-R1 Materials: Metal Video Input:...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Screen Size: 75-Inch Display Resolution: 3840 × 2160 Ultra HD Aspect Ratio: 16:9 Contrast Ratio: 5000:1 Brightness (cd/m2): 330 Nits Response Time(H/V): 8.5ms Viewing Angle (H/V): 178°/178°...
TCL 65-Inch 4K UHD Android TV (TCL65P725)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Screen Size: 65-Inch 4K HDDisplay Resolution: 3840*2160 Aspect Ratio: 16:09 Contrast Ratio: 5000:1 Brightness (cd/m2): 300 Nits Viewing Angle (H/V): 178°/178° Storage: 16GB OS: Android R (Android...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Screen Size: 65-inch Display Resolution: Ultra HD (3840×2160) Brightness (cd/m2): 330 Nits Aspect Ratio: 16:9 Contrast Ratio: 5000:1 Response Time (G to G): 8ms Viewing Angle (H/V):...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model No: TH-55JZ1000S Panel Technology: 4K OLED / Master HDR OLED Resolution (W x H): 4K Ultra HD / 3,840 x 2,160 Motion Technology: Smooth Motion Drive...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model No: TH-58JX700K Panel Technology: Super Bright Panel /4K LCD/Wide Viewing Angle Resolution (W x H): 4K Ultra HD/3,840 x 2,160 Motion Technology: 100 Hz MRR Multi...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model No: TH-50JX700K Panel Technology: Super Bright Panel /4K LCD/Wide Viewing Angle Resolution (W x H): 4K Ultra HD/3,840 x 2,160 Motion Technology: 100 Hz MRR Multi...
Sharp AQUOS 45-Inch Fyll HD Android TV 2T-C45BG1X
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Android TV- Enjoy plenty of Apps including videos, news and games X2 Master Engine - AQUOS original processor enhance the quality of experience High Dynamic Range -...
Sharp 32-Inch 2K UHD Android TV 2T-C32BD1X
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 32 inch HD Ready TV X2 Master Engine - The X2 Master Engine processor enhances your viewing experience Super ECO - Save more power and money bu...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Free Gift: Samsung 32-Inches HD LED TV UA32N4003AKXXT Product Type: LED Series: 8 Screen Size: 65" Resolution: 3,840 x 2,160 Moth Eye: N/A Screen Curvature: N/A Picture...
Hisense 32-Inch HD Smart TV 32A4G (Black)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: 32A4G Type: HD Smart TV Screen Size: 32″ Measured Diagonally Dimensins (Including Stand): 717 × 477 × 185mm Dimensins (Without Stand): 717 × 428 × 86mm...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Stock Code: QA65Q80TAKXMR Warranty: 1 Year Product: QLED Series: 8 Screen Size: 65" Resolution: 3,840 x 2,160 Picture Engine: Quantum Processor 4K Motion Rate: MR200 PQI (Picture...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Stock Code: QA55Q80TAKXMR Warranty: 1 Year Product: QLED Series: 8 Screen Size: 55" Resolution: 3,840 x 2,160 Picture Engine: Quantum Processor 4K Motion Rate: MR200 PQI (Picture...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Stock code: QA55LS01TAKXXT Warranty: 1 Year Product: QLED Series: LS Screen Size: 55" Resolution: 3,840 x 2,160 Picture Engine: Quantum Processor 4K Motion Rate: MR200 PQI (Picture...